1. N'oge a, inwe ọdịdị ihu Ma ọ bụ V-siri nri ihu Na agbanyeghị etu ị si ele ya anya, ọ dị ka ihe na-ewu ewu n'oge a Were foto mara mma dika Pangpuri Dị ka kpakpando Ọ bụ nrọ nke ndị na-eto eto Ọtụtụ mmadụ na-eche nsogbu ihu ọzịza ihu. A makwaara dị ka "nnukwu ihu" nke kpatara ụjọ Ma ọ bụ ụfọdụ na-eme ihe ọchị iji kwụsị inwe obi ike n’ise foto ma ọ bụ ibi ndụ Taa, anyị nwere ezigbo ndụmọdụ iji nyere gị aka ịnweta ọdịdị ihu mara mma yana etu ị ga-esi tufuo ibu ihu nke na-eme ka onye ọ bụla nwee ike ime ya na-enweghị nsogbu.
2. Na-emega ahụ ihu gị oge niile, mmega ahụ dị mfe nke nwere ike ịme n'ụbọchị. Ma ọ bụ tupu ị lakpuo ụra n'oge mkpa ezumike Dị mkpa dị ka ụzọ isi tufuo ibu ihu. I nwere ike ime ya naanị gị. Enwere usoro dị mfe:
3. Malite site na itinye nkwụ n'ọbụ aka ya abụọ. Mechie ezé ahụ ngwa ngwa iji mee ka agba gị sie ike. Pịa n'ọbụ aka gị iji megharịa ụlọ nsọ ka ọ bụrụ nke dị okirikiri nke 3 dị mfe ma nwee nkasi obi ka akwara nwee ume
4. Gaa n'ihu na ọnọdụ nke abụọ Malite site na itinye mkpịsị aka, etiti na mkpịsị aka jiri nwayọ na n'akụkụ abụọ nke cheekbones anyị. Jiri nwayọ jiri nwayọ, jiri nwayọ pịa mkpịsị aka atọ ahụ na ntì, jide 5 sekọnd, wee megharịa 10 ọzọ.
5. Ka anyị gaa n’ihu n’ọnọdụ nke atọ. Kpuchie ọnụ na akara aka Meenụ ka agba mpi afụli elu Mgbe ahụ megharia ifufe dị n'ọnụ ya na ntì aka ekpe. Gaa na ntì aka nri, na-eme 10 ntụgharị, na-atụrụ ndụ.
6. Ọnọdụ ikpeazụ bụ ịmịcha agba abụọ n'ime ọnụ gị ma jigide ọnụ gị maka sekọnd 5. Mgbe oge gafere, chịa ọchị mgbe ị na-ejide ọnụ maka sekọnd 3. Mee 10 laghachi azụ na ọnọdụ ọ bụla na mgbakwunye na ịdị mfe ịme. Na enweghị akụrụngwa siri ike Ọ bụrụ na-eme ya mgbe niile Na-enyere aka belata abụba gburugburu ihu Belata abụba ihu, gbanwee ka akwara, udi ke hà n'ụzọ dị mfe. Dị mkpa, echefula ime ya na mmega ahụ kwa ụbọchị.
7. Na-a moreụkwu mmiri Ozu zuru oke iji gboo mkpa ahụ, mmiri dị mkpa dị ka ụzọ isi tufuo ihu mmadụ. N'ihi na ọ na-emepụta ịdị ọhụrụ Nyere usoro nsị aka Ma debe sel nke akụkụ ọ bụla nke ahụ ọhụụ ma rụọ ọrụ ọ bụla Ọtụtụ ndị na-aghọtahie ya Na-a lotụ nnukwu mmiri Nwere ike ibute edema nke ihu na ahụ Nke bu eziokwu Na-a glassesụ iko mmiri 6 ruo 8 nke mmiri dị ọcha otu ụbọchị, ọkachasị tupu nri aka. Bulie otu iko mmiri ọ drinkingụ fullụ Na mgbakwunye na inyere gị aka ịkwụsị ibu Ume ume ọhụrụ Rie obere nri Na-emetụtakwa freshness nke ahụ dị ka nke ọma
8. Belata ihe oriri ị ofụ mmanya dị nro na mmanya na-aba n'anya. Usoro ndị ọzọ kwesịrị ịhazigharị ndụ ha Chọrọ inwe ihu mara mma n’otu N'ihi na mmanya na-eme ka mmiri gwụ mmadụ n'ahụ Na-emekwa ka ọzịza ihu Ruo mgbe akpụkpọ ahụ adịghị enwu gbaa, drinkụọ ntakịrị, ma nwee obi ụtọ ikuku. N'ihi na ezi ahụ ike bụ oyi
9. Na-elekọta nri ma zuru ike. Karịsịa ihe niile karịa ịnwepụta ụzọ ibu ibu Họrọ nri nwere eriri Nkpuru protein di nma dikwa nkpisi tinye vitamin na nkpuru ahihia dika apple, guava ma o bu nkpuru osisi citrus nke nwere obere sugar. Ọ dị mkpa inwe ezumike zuru oke. Ọ dị mma maka anụ ahụ gị na ahụike gị. Na ibi na nghọta nke ụwa Na-agbakwunye ume gị mgbe niile, ọ naghị esiri gị ike, tụkwasị uche na ndụ gị. Gbalịa iweta ụfọdụ ụzọ ị ga - esi gbue ihu n’ihu anyị na - akwado ime ya. Maka inwe ihu na-enwu gbaa na ọdịdị